Kum4Chung Ah Tlamtling Te DihKhawh Dingin Yangon Mo-pian Lam Tinda An Sok Mi Cu Cozah Nih January Thla Thok Ah Fianternak A Tuah Cang Lai. – Onlinenungak
Kum4Chung Ah Tlamtling Te DihKhawh Dingin Yangon Mo-pian Lam Tinda An Sok Mi Cu Cozah Nih January Thla Thok Ah Fianternak A Tuah Cang Lai.
၄နှစ်အတွင်း အပြီးတည်ဆောက်မယ့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ရန်ကုန် မိုးပျံ အမြန်လမ်း တင်ဒါစိစစ်မှု ရလဒ် အစိုးရထံတင်ပြီး ဇန်နဝါရီလအတွင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာမည်
ရန်ကုန်မိုးပျံအမြန်လမ်း တင်ဒါစိစစ်မှု ပြီးစီးပြီဖြစ်ကာ ရလဒ်ကို အစိုးရထံတင်ပြီးနောက် ထုတ်ပြန်ကြေညာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ လမ်းဦးစီးဌာန ၊ ရန်ကုန်မိုးပျံအမြန်လမ်းကော်မတီမှ သိရသည်။
” ကျွန်တော်တို့ အခုဦးဆောင်ကော်မတီက စိစစ်ပြီးသွားတော့ ကတ်ဘိနက်ကို တင်ဖို့လုပ်နေပါတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ သဘောတူညီချက်ရပြီးတာနဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်။ နောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီ ၃ ခုအနက်က တစ်ခုကိုပဲ ရွေးချယ်ကြေညာမှာပါ။
အစိုးရအဖွဲ့ကနေ ပြန်ကျလာတာနဲ့ ကြေညာပေးလို့ရပါပြီ။ ကြေညာတာကတော့ ဇန်နဝါရီ လထဲမှာ ဖြစ်နိုင်ပါမယ်။အခုချိန်မှာတင်ဒါအောင် ကုမ္ပဏီကို ထုတ်ဖော်ပြောလို့မရသေးပါဘူး” ဟု
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ လမ်းဦးစီးဌာန ၊ ရန်ကုန်မိုးပျံ အမြန်လမ်း ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကြည်ဇော်မြင့်က ကိုပြောသည်။
တင်ဒါအောင်ကုမ္ပဏီအား ဧပြီလကုန်ပိုင်းတွင် ဖွင့်ဖောက်ရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်းCOVID – 19 ကူး စက်ရောဂါကြောင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကြန့်ကြာခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ မိုးပျံအမြန်လမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပထမအကြိမ် ပြည်သူနှင့်တွေ့ဆုံပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်မှ မတ်လ ၁ ရက်အထိ တံတားဖြတ်သန်း တည်ဆောက်မည့် မြို့နယ်များ၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပြည်သူများ ၏ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုများကို မှတ်သားကာညှိနှိုင်းမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
“လုပ်ငန်းစဉ်တွေက ကိုဗစ်ကြောင့် တော်တော်ကို နှောင့်နှေးခဲ့ရတယ်။ အခုဆိုရင် ၆ လောက်လောက် နောက်ကျသွားတယ်။ အောက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာမှာ ထုတ်ပြန်ကြေညာဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် လည်း အဓိအားဖြင့် ကိုဗစ်ကြောင့် လုပ်ငန်းတွေကြန့် ကြာခဲ့ရတယ်” ဟု ဦးကြည်ဇော်မြင့်က ပြောသည်။
မိုးပျံအမြန်လမ်း စီမံကိန်း၏ စိတ်ဝင်စားမှု အဆိုပြုလွှာအား ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလတွင် ခေါ်ယူခဲ့ရာကုမ္ပဏီ ၅၃ ခုက ရင်းနှီး မြှုပ်နှံရန် စိတ်ဝင်စားကြောင်း တင်ပြခဲ့သည်။
အကြို အရည်အချင်းစစ် အဆိုပြုလွှာ ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် ခေါ်ယူခဲ့ရာConsortium အဖွဲ့ (၁၂) ဖွဲ့မှ လျှောက်ထားခဲ့ပြီး အကြိုအရည်အချင်းစစ် အောင်မြင်သည့်
(Prequalified Bidders) (၁၀) ဖွဲ့ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက် တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးယင်းကုမ္ပဏီများက ဧပြီလတွင် အဆိုပြုလွှာ ထပ်မံတင်ပြရသည်။
ထို့နောက်စိစစ်မှုပြုလုပ်ပြီး ထုတ်ပြန်ကြေညာရန်မှာ ကိုဗစ်ကြောင့် ကြန့်ကြာ ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။“ကုမ္ပဏီ ၃ ခုပဲကျန်တယ်။ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ ၊ ထိုင်း နဲ့ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေပါ။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီကို ရွေးတာပါ။
အဓိကအနေနဲ့ ငွေရေးကြေးရေးအာမခံချက်တွေကို စိစစ်တယ်။လုပ်ငန်းနဲ့ နည်းပညာအပိုင်းက အကုန်လုံးက ကျွမ်းကျင်ပြီး သားတွေပါ။ ငွေကြေး တကယ်ထည့်မှာလား။
တကယ်အာမခံမှာလား ဆိုတာတွေကို လိုက်ရပါ တယ်” ဟု ဦးကြည်ဇော်မြင့်က ပြောသည်။အဆိုပါမိုးပျံလမ်းမှာ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ တို့ကPublic Private Partnership ( PPP) စနစ်ဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး
စီမံကိန်းလမ်း အူကြောင်းမှာ မြို့နယ် ၈ ခုဖြစ်သည့် မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ၊ တာမွေ ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း ၊ တောင်ဥက္ကလာပ ၊ မြောက်ဥက္ကလာပ ၊ မရန်းကုန်း ၊ မင်္ဂလာဒုံနှင့် အင်းစိန်မြို့နယ်တို့ကို ဖြတ်သန်း ဆောက်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။
လမ်းအရှည်မှာ ၂၇ ဒသမ ၅ ကီလိုမီတာ၊ အမြင့်မှာ ၈ မီတာမှ ၁၉ ဒသမ ၅ မီတာနှင့်အသွား အပြန် ၄ လမ်းသွားလမ်းဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းတန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၉၀၀ ခန့် ရှိမည်ဖြစ်သည်။
တည်ဆောက်ရေး ကာလမှာ ၄၂ လ ဖြစ်ပြီး ကိုဗစ်ကြောင့် လုပ်ငန်းကြန့်ကြာခဲ့သော်လည်း၂၀၂၅ မေလတွင် အဆိုပါလမ်းကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ရန် တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။